Homeसमाचारकिरणको गीत ‘फेवामा टल्कियो’ मा छुल्ठिमको अहिले सम्मकै दमदार अभिनय (भिडियो हेर्नुहोस्)
January 12, 2021 admin समाचार 4133
फेवामा ट’ल्कियो बोलको गीतको भिडियो पोखराको फेवाताल लगायतका पोखराकै बि’भिन्न रमणीय स्थलमा खिचिएको छ । भिडियोमा छुल्ठिम गुरुङ र तीर्थ कोजुको अ’भिनय रहेको छ । लक्ष्मण सुनारले निर्देशन गरेको भि’डियोमा सौरभ लामाको छायांकन रहेको छ । आत्रेय प्रोडक्शनले निर्माण गरेको भिडियोको कार्य’कारी निर्माता हरि लामा र निर्माता सुदिप आत्रेय छन् ।
भिडियोमा गाउँगाउँमा साइ’कलमा समान बेच्ने फिरन्ते युवा र एक युवतीको अधुरो प्रेम’कथा प्रस्तुत गरिएको छ । गीतले क्रमशः दर्शक’स्रोताको मन जित्दै जाने विश्वास गायक माइकलले ओएस नेपालसँगको कुरा’कानीमा व्यक्त गरेका छन् । – ओएस नेपालबाट
August 24, 2020 admin समाचार 15192
March 27, 2021 admin समाचार 2391
January 10, 2021 admin समाचार 5622
सुतेर पनि इम्युनिटी पावर बढाउन सकिने यस्तो छ जन’स्वास्थ्य विज्ञ डा. पाण्डेको सुझाव (205554)
भाण्टा खाँदा हुने १३ फाइदा’हरु (196909)
विवाहित महिलाले किन सिउँदोमा सिन्दुर लगाउँछन् , जान्नुहोस रहस्य.. (196406)
कपालमा चाँया परेर हैरान हुनुहुन्छ ? यी हुन् चाँया हटाउने घरेलु उपाय… (196252)
सुशान्त केश’ले लियाे नयाँ मोड, रियाको भाइको ‘गोप्य च्याट’ बाहिरियो…हेर्नुहोस् (194738)
छोटो समयमै छिटो कपाल बढाउने तरीका यस्तो छ: थाहा पाहुनुहोस् (194423)
यसरी बनाउनुहाेस्: मात्र केही समयमानै तपाईंको पहेलो दाँत चम्किलो … (192622)
चर्चित हाँस्यकलाकार तथा समाजसेवी धुर्मुसको जन्मदिन आज, कति वर्ष लागे उनी ? थाहा पाउनुहोस् (192257)
लियोनेल मेसी बने विश्वको सबैभन्दा बढी कमाउने फुटबलर, कति कमाए त उनले ? थाहा पाउनुहोस् (185037)
प्रहरीले पक्रा’उ गर्न खोजेपछि भिटेनले अचानक यस्तो भने, सबैलाई गरे यस्तो अनुरोध (भिडियो सहित) (161708)